နာဂိုယာမြို့တွင်အာဆီယံစီးပွားရေး ဖိုရမ်ကျင်းပ | Commerce Journal
Home » -ပြည်ပရှိမြန်မာသံရုံးများမှပေးပို့သောသတင်းများ » နာဂိုယာမြို့တွင်အာဆီယံစီးပွားရေး ဖိုရမ်ကျင်းပ » အထွေထွေ
Mon, 03/09/2015 - 21:19 -- journal_editor
ဂျပန်နိုင်ငံ၊ နာဂိုယာမြို့၊ အန်နာခ ရောင်းဟိုတယ်၌ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၃ ရက်က ''အာဆီယံ စီးပွားရေးဖိုရမ်''ကို ကျင်းပခဲ့ပြီးအဆိုပါဖိုရမ်တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အခွင့်အလမ်းများနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေး ဟောပြောမှုများကိုဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါ သည်။
အဆိုပါဟောပြောပွဲအား နာဂိုရာ ကုန်သည်စက်မှု အသင်းဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ တိုကုအိချိအိုကာယာကအဖွင့်အမှာ စကားပြောကြား၍ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ အအိချိခရိုင်ဒေသ အစိုးရ၊ အာဆီယံ-ဂျပန်စင်တာ၊ ဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေး အဖွဲ့အစည်းနှင့်နာဂိုယာကုန်သည်စက်မှုအသင်းတို့မှ ဦးဆောင် ကျင်းပခဲ့ခြင်းလည်းဖြစ်သည်။ အအိချိခရိုင်သည် မီအဲ၊ ဂီဖု၊ နာဂါနိုနှင့် ရှီဇူအိုကာခရိုင်တို့နှင့်ထိစပ်လျက်ရှိပြီး တောင် ဘက်တွင် ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာကိုမျက်နှာမူထားကာ ဂျပန်နိုင်ငံ ၏ ဗဟိုနေရာတွင်တည်ရှိသည့်ခရိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ လူဦး ရေ ၇ ဒသမ ၄ သန်းကျော်နေထိုင်ပြီး မစ်ဆူဘီရှီ၊ တိုယိုတာ၊ ယမဟာကဲ့သို့သော အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများရှိသဖြင့် စုစုပေါင်း အသားတင်ထုတ်လုပ်မှုမှာ ယန်းပေါင်း ၃၁၆၄၂ ဘီလီယံရှိသည့် ခရိုင်တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။အဆိုပါ ခရိုင် အနေဖြင့် မြန်မာအပါအဝင် အခြားသောအာဆီယံနိုင်ငံများသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်မည့် အခွင့်အလမ်းများကို ၎င်းင်းတို့အုပ်ချုပ်မှုဒေသရှိ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ်၍ နှစ်စဉ်ကျင်းပခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး ယခုအကြိမ်မှာ စတုတ္ထ အကြိမ်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရပါသည်။
အဆိုပါ အာဆီယံဖိုရမ်ကို ပထမပိုင်းတွင် အာဆီယံ နိုင်ငံ သံရုံးကိုယ်စားလှယ်များမှ ၎င်းင်းတို့သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံ အလိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအခွင့်အလမ်းဆိုင်ရာများနှင့် ဂျပန် နိုင်ငံနှင့် နှစ်နိုင်ငံစီးပွားဆက်ဆံရေး အကြောင်းအရာများကိုဟောပြောပို့ချရခြင်းဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် မလေးရှား နိုင်ငံတို့မှ သံအမတ်ကြီးများလည်း တက်ရောက် ဟောပြောခဲ့ ကြပြီးကျန်အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ သံမှူးကြီး^သံရုံးဒုတိယအကြီး အကဲတို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ တိုကျိုမြို့ ရှိမြန်မာနိုင်ငံသံရုံးမှ သံအမတ်ကြီးကိုယ်စား စီးပွားရေးသံမှူး ကတက်ရောက်၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်း များ၊ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပတ်ဝန်းကျင် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် နှစ်နိုင်ငံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ထားမှုများ၊ ဥပဒေရေးရာ အခြေခံ အဆောက်အအုံပြုပြင်ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုများ၊ လူသားအရင်း အမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ဓါတ်အားရရှိရေး အတွက် ဆောင်ရွက်နေမှုများ၊အေအီးစီတွင် လိုက်ပါနိုင်ရေး ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေမှုများ စသည်တို့ကို ဆွေးနွေး ပြောကြားခဲ့သည်။
ဖိုရမ်ဒုတိယပိုင်းတွင် ''အာဆီယံနိုင်ငံများ၏ ဝန်ဆောင် မှုနှင့် ကုန်စည်ကုန်သွယ်ရေးတွင် ဖြေလျော့ပေးမှု အခြေအနေ နှင့် ဂျပန်နိုင်ငံ''ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကို ကျင်းပ ခဲ့ရာ ဂျပန်ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်း(JETRO) မှ အမှု ဆောင် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Mr.Daisuke Hirat-suka မှ သဘာပတိ အဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ စကားဝိုင်း ဆွေးနွေးပွဲ တွင် အာဆီယံနိုင်ငံများမှတက်ရောက်သူများအနေဖြင့် ကမ္ဘာ့ ှSupply Chain ဖြစ်စဉ်တွင် ပိုမိုပေါင်းစည်းပါဝင်လာ ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံအနေဖြင့်မည်သည့်အခန်းမှ ပါဝင် စေလိုကြောင်းနှင့် ဝန်ဆောင်မှုကုန်စည်များ တန်ဖိုးမြှင့် ရာတွင် ဂျပန်နိုင်ငံမှ မည်သို့ပါဝင်ကူညီစေလိုကြောင်းစသည့် မေးခွန်းများကို ဖြေကြားခဲ့ကြရကြောင်းလည်း သိရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ စီးပွားရေးသံမှူးအနေဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကုန်စည်များတန်ဖိုးမြှင့်တင်ရာတွင် အဓိက အားဖြင့် နည်းပညာနှင့် သင်တန်းများကို ဂျပန်နိုင်ငံမှ ပေးအပ်ရန်လိုအပ်ကြောင်း၊ သင်တန်းများအနေဖြင့် ထုတ်ကုန် အရည်အသွေးနှင့် ဝန်ဆောင်မှုအရည်အသွေး မြင့်တက်စေမည်ဖြစ်သော်လည်း လက်ရှိတွင် မြန်မာနိုင်ငံ ထုတ်ကုန်များ အနေဖြင့် ခိုင်မာသော ဈေးကွက်ရရှိရေးမှာလည်း အဓိကကိစ္စဖြစ်နေပါကြောင်း၊ ထို့ကြောင့် နည်းပညာများကို သင်တန်း ပို့ချ၍ ပေးခြင်းထက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ ဈေးကွက်ရရှိပြီးဖြစ်သည့် နည်းပညာမြင့်အရင်းအနှီးများ ဝင်ရောက်လာခြင်း၊ ဖက်စပ် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ အသေးစားနှင့် အလတ်စားစက်မှုလုပ် ငန်းများ ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလာစေလိုပါကြောင်း၊ အစိုးရ အနေဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမြှင့်ရေး အခြေခံကောင်းများ ဖော် ဆောင်လျက်ရှိပါကြောင်း၊မကြာမီလက်မှတ် ရေးထိုးမည်ဖြစ် သည့် အာဆီယံ-ဂျပန် ဘက်စုံစီးပွားရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက် မှုစာချုပ်၏ အခြေပြုစာချုပ်ငယ်များတွင်မြန်မာနိုင်ငံအနေ ဖြင့် ဂျပန်နိုင်ငံအား ဝန်ဆောင်မှုကဏ္ဍများစွာကို ဖွင့်လှစ်ပေး ထားပြီးလည်း ဖြစ်ပါကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ကုန်စည်နှင့် ဝန် ဆောင်မှု တန်ဖိုးမြှင့်တင်နိုင်ရေးအတွက် ဂျပန်နိုင်ငံမှ တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုရှိ၍ အရည်အသွေးရှိသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ (Quality Investment) များကို မြန်မာနိုင်ငံမှ ဖိတ်ခေါ်လိုပါကြောင်း စသည်ဖြင့်ဆွေးနွေးပြောကြားခဲ့ကြောင်း လည်း
သိရှိရပါသည်။အဆိုပါ အာဆီယံဖိုရမ်ကို ညနေ ၅ နာရီတွင် ပြီးစီးခဲ့ ပြီး တက်ရောက်လာသည့် လုပ်ငန်းရှင်များအား မြန်မာနိုင်ငံ နှင့်ပတ်သက်သည့် ခရီးသွား၊ ကုန်သွယ်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆိုင်ရာ လက်ကမ်းစာစောင်များလည်း ဖြန့်ချိပေးနိုင်ခဲ့ ကြောင်းလည်း သိရသည်။ ၎င်းင်းနောက် ညနေပိုင်းတွင်Business Networking နှင့်ဆိုင်သည့် ဧည့်ခံပွဲ ကျင်းပခဲ့ပြီး အဆိုပါ ဧည့်ခံပွဲသို့ အအိချိခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးMr. Hideaki Ohmura နှင့် နာဂိုယာဆိပ်ကမ်းအာဏာပိုင်မှ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌMr. Takayuki Kondo တို့လည်း တက်ရောက်ခဲ့ကြကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။ တက်ရောက်လာသည့် လုပ်ငန်းရှင်များ အနေဖြင့် အာဆီယံနိုင်ငံများအနက် အင်ဒိုနီးရှား၊ ဖိလစ်ပိုင်၊ ထိုင်း၊ဗီယက်နမ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံတို့အပေါ်တွင် အထူးစိတ်ဝင် စားမှုရှိခဲ့ကြောင်း လည်းသိရသည်။